News - Gịnị Ka Do Maara Banyere Nta Mmanụ Nta?
Gịnị Ka Know Maara Banyere Nta Mmanụ Nta?
A ga-eji bọọdụ ajị anụ mee ihe n'ụdị dị iche iche n'oge mmepụta, nke dabara adaba maka iji ebe dị iche iche. Ebe a na-ahụkarị na bọọdụ ajị nwere ịnweta oghere, nnukwu oghere na obere obere, pinholes dị elu, njupụta ájá na ọgwụgwọ ihe nkiri. Anyị nwekwara ike ịme ọtụtụ ihe osise n’elu ala, dị ka bọọdụ igbe dị warara, ebe nlezi anya, bọọdụ, wdg. Ogwe ahụ na-anabata ụda anaghị enwe ihe ndị dị ize ndụ nye ahụ mmadụ, ma ihe owuwu ya nwere ike ịmịkọrọ gas na-adịghị mma. ikuku ma wepụta ụmụ irighiri mmiri, nke mere na ọ nwere ike sachapụ ikuku ma dozie iru mmiri ikuku dị n'ime.
Ike ike na-egosipụta na ajị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma n’ime ụlọ, mepụta anya ma wepụ ike ọgwụgwụ. Ntughari uche di elu nwere ike wedata onu oriri ike, rue 18% 25% mineral ajị mkpuchi dị oke mma, arụ ọrụ mkpuchi nwere ike ime ka mbelata dị jụụ na ọnụ ahịa kpo oku, ruo 30% 45% ọnụ ahịa. Isi ihe akụrụngwa nke bọọdụ a na-enweta ajị anụ dị na ya bụ eriri ajị anụ dị ezigbo mma, nwere njupụta n'etiti 200 - 300Kg / m3, ya mere o nwere ọgaranya site na micropores, nke nwere ike ịmịcha ụda ebili mmiri ma belata echiche ụda mmiri, si otú ahụ imeziwanye ụda dị n'ime ụlọ na ibelata mkpọtụ.
Iji wụnye bọọdụ ajị ịnweta, a ga-eme ụzọ dị iche iche na nkuku nke bọọdụ ahụ iji kwekọọ sistemụ ube a kwụsịtụrụ. Yabụ, n'ọnụ nwere ike ịbụ akuku ihu, akuku ihu, n'akụkụ ọnụ, kapịrị ọnụ ma ọ bụ nke ihu.
Oke ọkpụrụkpụ ahụ nwekwara ike ịbụ 14mm ruo 20mm dabere na mkpa dị iche iche. Nkọwa ndị a na-akọkarị bụ 595x595mm, 600 × 600mm, 603x603mm, 605x605mm, 625x625mm, 595x1195mm, 600 × 1200mm, 603x1212mm, wdg.
Mgbe a na-arụ bọọdụ ajị ahụ, a ga-emechi ime ụlọ ahụ iji gbochie ntinye nke ikuku iru mmiri nke na-eme ka osisi nke ajị ahụ mebiri emebi mechie;
N'oge nrụnye, ndị ọrụ kwesịrị iyi uwe aka dị ọcha iji mee ka bọọdụ ahụ dị ọcha.
Kọmịlo nke ajị nwere ọrụ dị mma dịka mmịpụta ụda, nkwanye ọkụ, mkpuchi ọkụ, mma dị mma, wdg A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na ihe eji eme mgbidi; dị ka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ, ụlọ oriri na ọatersụ ,ụ, ebe a na-ere ihe, ebe a na-ere ihe, ebe a na-anọ ere ọrụ, ebe a na-anọ atụrụ ndụ, ebe a na-edebe ihe oriri, ụlọ kọmputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.